शीरफुले, सालैजो, यानिमायाँ र अविजाले मायाँ आजकल हराए | BikalpaNews.com- the most popular online magazine of Nepal
Home अन्तवार्ता शीरफुले, सालैजो, यानिमायाँ र अविजाले मायाँ आजकल हराए
म्याग्दी जिल्लाको चिमखोला गाविस ८ मा बाबा दिलबहादुर थापा र रामसरा थापाको कोखबाट २०१६ कार्तिक ३ गते जन्मीएकी धनकुमारी थापाले विद्यालय तहको पढाइ स्थानीय ज्ञानप्रावि (हाल अमर मावि)बाट प्राथमीक तहको अध्ययन सकेपछि पोखरा कन्या माविबाट निमावि अध्ययन सकेकी थिइन् । उनले म्याग्दीको प्रतिनिधित्व गर्दै धेरै पटक दोहोरी गाइन र पुरुष कलाकार कृष्णदत्त पौडेल र धनकुमारी थापाको जोडीले धेरै उपाधि जिते उनै धनकुमारी थापा सँग नवविकल्पका कला संवाददाता अमृत बास्कुनेले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ ः
म्याग्दीको साँगीतिक क्षेत्रमा कसरी प्रवेश गर्नुभयो ?
छोरीले पढ्ने भन्ने चलन थिएन । तै पनि बाबा आमाको प्रेरणाले मैले पढ्न पाएँ र विद्यालयमा हुने शुक्रबारको कार्यक्रममा हुँदा म सहभागी हुन्थे । आफू भन्दा ठूला दाजुदीदीहरु गाउँमा रोदी बस्दा मैले हेर्थे । पहिलो पटक मुस्तांङमा भएको लोक नृत्य तथा दोहोरी प्रतियोगीतामा म पहिलो भएकी थिएँ त्यसपछि यस क्षेत्रमा लाग्नका लागि मलाइ थप हौसला मिल्यो ।
तपाईको परिवारीकक अवस्था कस्तो रहेको छ ?
मेरो परिबारमा बा, आमा खेतीपाती गर्नुहुन्थ्यो । भारतीय सेनाको जागिरे हुनुहुन्थ्यो बाबा तर विचैमा जागिर छाडेर आउनु भयो । मेरी आमाको निधन २०४० सालमा भएको थियो र २०५२ सालमा बाबाको निधन भएको हो । परिवारको जेठी छोरी भएकाले मेरो जिम्मेवारी पनि थियो भाइ बहिनी हेर्ने । अहिले भाइ अमर मावि चिमखोलामा प्रअ छन् भने बहिनी मालपोत कार्यालय म्याग्दीमा जागिरे र अर्की बहिनी वाखेतमा छिन् । परिवारका सबै सरकारी जागिरे छौं अहिले । मेरो श्रीमान सेवा निबृत्त शिक्षक हो र मेरो एउटी छोरी अष्ट्रेलिया छिन् उनको विवाह भै सकेको छ । म पनि अहिले शिक्षण पेशाबाट सेवा निवृत्त भएर बसेको छु ।
अहिले सम्म तपाइले लोक दोहोरीगीत कति गाउँनुभयो ?
२०३१ सालमा जोमसोममा भएको कार्यक्रममा धेरै मनोरञ्जन दिएका थियौं । त्यस बखत मैले भनेको थिए सानै थिएँ काखैमा अटाउने नआत्तीनु छैन म सताउने भन्ने शब्द प्रयोग भएको थियो । त्यस बखत झाल झालैमा भन्ने भाखाको गीत गाएको थिएँ । मैले दुइ दर्जन गीतको क्यासेट निकालेको थिएँ । शिरफुले, सालैजो, यानिमायाँ, अविजाले मायाँ, साइलो भाका, खोला पारी निरमायाँ गाएको थिएँ बमबहादुर कार्की सँग । रेल पुग्यो बम्बैमा बिरबहादुर कार्की र सञ्जय श्रेष्ठ सँग, भेट भयो सलल, धौलागिरी बन, निरमया, सिरवन्दीलगायतका एकल तथा संयुक्त रुपमा गाएका झण्डै दुई दर्जन गीतका क्यासेट रेकर्ड भएका थिए । शिला क्यासेट सेन्टर, म्युजिक नेपाल, रेडियो नेपाल, झरना संगीत, रिमा रेकर्डीङ, गोर्खा म्युजिक, आरआरसी म्युजिक लगायतका कम्पनिहरुबाट मैले अडियो क्यासेट निकालेको थिएँ । बमबहादुर कार्की, प्रेमराजा महत, रत्न बानियाँ, पाण्डब सुनुवार, तिर्थबहादुर गन्दर्भलगायतका कलाकारहरु सँग मैले गीत गाएको थिए । मिठो बोली, सोल्टी ज्यू लगायतका क्यासेट निकाले मैले । २०४४ मा भएको चौथो राष्ट्रिय लोक नृत्यमा हाम्रो समूह पहिलो भएको थियो ।
अरुको शब्द नै गाउने गर्नु भएको छ कि आफ्नै शब्द हो गाउने ?
संगीत मैले सिकेन, शब्द भने मैले आफै लेख्थे । सबै तीर हेर्दा कलाकारहरु सबैको समस्या देखे । कलाकारहरु पनि बाँच्न निकै कठीन अवस्था भएकाले मैले आफ्नो स्थायी जागिर थियो शिक्षण यसलाई छोड्न सकिन । संगीतको क्षेत्र मेरो निकै रुचीको विषय थियो तै पनि यसलाई निरन्तर दिनका लागि केही सकिन । आखिर आर्थिक समस्या पनि यस क्षेत्रमा थियो नै । मैले यहाँबाट काठमाण्डौ जानु पर्ने गीत रेकर्ड गर्नका लागि । समस्या निकै हुन्थ्यो त्यसैले आफ्नै शब्दको गीत रेकर्ड गराएपनि शिक्षण पेशा छाड्न सकिएन ।
संगीत क्षेत्रमा लाग्ने क्रममा तपाईलाई कसले सहयोग गर्नु भयो ?
गलेश्वर मेलामा हुन्थ्यो कहिले काँही दोहोरी हुन्थ्यो तर धेरै पछि । २०३९ ताका होला साहद । तर त्यस पहिला गलेश्वरमा हुदैनथ्यो । गोपाल भट्टचनले निकै राम्रो यानिमायाँ गाउनु हुन्थ्यो । गोपाल भट्टचनसँग २०४० सालमा हुनु पर्छ यानिमयाँ गाएको थिएँ उहाँले तिमि पारी म छु वारी छिटै हालौं पुल, चर्को घामको पानी तिर्खा देखिनौं कि मुल, भन्ने टुक्का भन्नु भएको थियो । गहिरो तालको सुनको औंठी मनले देखि भो र, मैले नजिक सम्झीएनी हुन्छौ पर पर भनेर मैले रिप्लाई दिएको थिएँ । यानिमायाँ जगाउनका लागि उहाँको पनि योगदान छ । ओखरबोटको काजु शेरचनले गलेश्वमा लोकदोहोरी प्रतियोगिता राख्ने तारतम्य मिलाउनु भएको थियो । काजुले गलेश्वरका स्थानीय युवाहरु सँग मिलेर गर्नु भएको थियो । गलेश्वरका अमृतमान शेरचनका बुबाले गलेश्वरमा दोहोरी प्रतियोगिताको व्यवस्था मिलाउनु भएको हो । त्यस ताका शिरफुले मायाँ हामीले गाउँथ्यौं । लोक दोहोरी गाउन हामी बागलुङ जान्थ्यौं म्याग्दीका कृष्णदत्त पौडेल र मैले लिड गरेर चैते दशैं मेलामा गएका थियौं । जज थिए प्रजापति पराजुली चितवनका रफिक मियाँको टोली सँग हाम्रो टोलीले गाउने बेलामा नम्बर बराबर बनाइ दिए । फेरी गाउन भने पछि कृष्णदत्त पौडेल र मेरो एउटै टोली हो हामीले प्रतियोगिता त्यागेर आयौं । त्यसपछि कृष्ण पौडेलले गाउन छोड्नु भयो । त्यो प्रतियोगिता दुःखद् क्षण हो किनकी म्याग्दीले एक जना कलाकारलाई लोकदोहोरी क्षेत्रबाट टाढा राख्न परेको थियो त्यो चैते दशैं मेलापछि।
दोहोरी गाउन कहाँ सम्म पुग्नु भयो अनि कस्तो रहेको थियो परिणाम ?
दोहोरी गाउनका लागि बिरगंज, भैरहवा, कास्की, दोलखा, नेपालगञ्जमा पुगेको थिएँ । नेपालगञ्जमा म र कृष्ण पौडेलको टोलीले प्रजापति पराजुलीको टोलीलाई पराजित गरेको थियो । नारायण पाण्डे र कोमल ओलीको टिमसँग हामी पराजित भएका थियौं । सोही रिसले पछि चैते दशैं मेलामा हाम्रो जज बन्न आइपुगे प्रजापति र हामीलाई प्रतियोगीता त्याग्ने बनाएका थिए । कोमल ओलीलाई कृष्णले जित्नु भएको थियो नारायणले मलाई जित्नु भयो समग्रमा हामी दोश्रो भएका थियौं । त्यस बखत नारायण पाण्डेले डाक्टर पनि छेवैमा आको थ्यो सुत्केरी पीरले आधा परान गाकोथ्यो भनेका थिए मैले त्यस बखत म सुत्केरी ध्यू मासु झोल खाने तिमि छेउमा मुखबाट ¥याल चुहाउने भन्ने टुक्का फर्काएको थिएँ । मलाई याद भएको मध्ये दोश्रो भएको यही हो । नत्र कृष्ण पौडेल र मेरो जोडीले धेरै ठाँउमा पहिलो पुरस्कार जितेको थियो ।
अन्तर कस्तो लाग्छ अहिलेको गीतसंगीत र पुरानो गीत ?
पहिलेका गीतहरु सुन्दा मानिसहरु भावुक भएर रुन्थे भने अहिले गीत सुन्दा सुन्दै मानिसले गालि गर्छन् । यस्तो भन्दा अहिलेका गायक गायिकाहरुलाई पीडा हुनसक्छ तर पनि अहिलेका गतिमा लाजमर्दा शब्दहरुको प्रयोग बढि भएका छन् । उत्ताउलो पाराका शब्दहरु प्रयोग बढ्दो छ । परिवार सँगै बसेर गीत सुन्न सक्ने अवस्थाका पनि हुँदैनन् । अहिलेका लोकदोहोरी गीतको म्युजिक भिडियोले झन लाजमर्दो अवस्था सृजना भएको छ । म्युजिक भिडियोका कलाकारहरुले लगाएको कपडाको त झन कुरै नगरौं होला ।
म लोकदोहोरी प्रतिष्ठान केन्द्रको संस्थापक सदस्य हुँ र दुई पटक केन्द्रीय सदस्य बनेँ । मलाई प्रतिष्ठानको २०६१ सालमा केन्द्रीय अधिवेशन हुँदा किरण सापकोटा र कृष्ण जिसीले निकै ठूलो भूमिका खेल्नु भएको थियो मलाई केन्द्रीय सदस्य बनाउन । अहिले म म्याग्दी लोकदोहोरी प्रतिष्ठानको सल्लाहकार हुँ । प्रतिष्ठान म्याग्दीका अध्यक्ष कुलदिप जुग्जालीले अहिले लोकदोहोरीलाई चलाउने प्रयास छन् । उनको प्रयास हो तर म्याग्दीको पुरानो साखजोगाउनका लागि त्यत्तिले पुग्दैन । अहिले हुने गरेका लोकदोहोरी गीत प्रतियोगीताहरुमा जिल्लाको प्रतिनिधित्व गराउने गरेका छन् । तर यहाँ महिला कलाकारको अभाव भने खड्कीएकै छ ।
मैले रेडियो नेपालबाट पनि धेरै गीत गाएँ । थाली नाच र अविजाले मायाँ गीतमा पनि धेरै पटक प्रतिनिधित्व गराएको थिएँ । २०४४ सालमा काठमाडौंमा भएको सार्क सम्मेलनमा थालिनाच प्रस्तुत गरेका थियौं त्यसको नित्य निर्देशन मैले गरेको थिएँ । गीतको शब्द संकलन मैले आफै गरेको छु । मैले लोकदोहोरी क्षेत्रमा भएकै कारण झण्डै २० वटा जति सम्मान पाएको छु ।
स्थानीय कलाकार उत्पादनमा अब जोड दिनु पर्छ । बाहिरबाट कलाकार ल्याएर गाउँदा रमाइलो त हुन्छ तर स्थानीय कलाकारहरु पछि परेका छन् । स्थानीयलाई प्रोत्साहन दिने हो भने भविष्य सम्म पनि हाम्रा कलाकार र स्थानीय लोकदोहोरीको जगेर्ना हुन्छ । राजधानीका लोकदोहोरीमा गाउने कलाकार ल्याएर म्याग्दीमा हुने कार्यक्रममा सहभागी बनाउँदा स्थानीयलाई पछि पार्ने काम भएको छ । अहिले सञ्चार माध्यमले गर्दा पनि स्थानीय कलाकार उत्पादनमा सहज छ तर त्यसलाई बाहिर निकाल्ने अवसरको रुपमा देखिने प्रतियोगीताहरुमा बाहिरका कलाकारलाई बढि प्रोत्साहन दिँदा स्थानीयलाई समस्या भएको छ । सुन्ने दर्शक श्रोताले पत्याउने खालको हुनु पर्छ । मन्दीर हामीले राम्रो देख्छौं तर त्यो मन्दीर राम्रो बनाउने मानिस झनै राम्रो हो नि भन्ने हेक्का हामीमा हुन जरुरी छ ।
डम्मर पुर्जा, राधा पुन, उजेली पुन, कुमारी थापा, वीरबहादुर कार्की, हर्क पाइजा, नरबहादुर विसी, प्रदिप श्रेष्ठ, सञ्जय श्रेष्ठलगायतका कलाकारहरुले पहिलाको लोकदोहोरी धानेका हुन् । मेरो कुरा राख्ने मौका दिनुभएकोमा अमृत भाइ र यहाँको सञ्चार माध्यम नवविकल्प पत्रिकालाई धन्यवाद समग्र कलाकारको तर्फबाट ।